Semalt သည် Sharebutton Referral Spam များအားပိတ်ဆို့ရန်နည်းလမ်းများကိုအကြံပြုသည်
Sharebutton အတုလွှဲပြောင်းဒိုမိန်းသည်သင်၏ Google Analytics စာရင်းဇယားကိုညစ်ညမ်းစေသလား။ သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အေးဆေးနေပါ Sharebutton.to လွှဲပြောင်းသော spam များကသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လာရောက်လည်ပတ်သူများကိုများပြားစေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
လွှဲပြောင်းမှု spam အတုများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော် Sharebutton Google Analytics သည် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကဏ္inတွင် GA ဒေတာကိုညစ်ညမ်းနေဆဲဖြစ်သော timer အဟောင်းဒိုမိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းမြင်များအရ၊ Sharebutton သည် GA အကောင့်များကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိစေရန် spam များကိုရည်ညွှန်းသည်။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူများကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်, spammers များနှင့်တိုက်ခိုက်သူများသည်သော့ချက်စကားစု၊ visitors ည့်သည်များ၊ bounce နှုန်း၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအတုနှင့်အတုအယောင်အသွားအလာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ချိတ်ဆက်မှုများစသည့်မက်ထရစ်ကိုအသုံးပြုနေကြသည်။
သင်၏ traffic အများစုသည် Sharebutton လွှဲပြောင်း spam များမှဖြစ်ကြောင်းမကြာသေးမီကသင်တွေ့ရှိခဲ့ပါကသင်သည် Google Analytics spam များကိုသင် spammers များနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုစဉ်းစားပါ။ SEO ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ Sharebutton သည်ပြုပြင်ထားသော URL စကားလုံးများကို အသုံးပြု၍ button နှင့် share စသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ခိုးယူခဲ့သည်။
Sharebutton Google Analytics spam များကိုသင့်ရဲ့ Spike အသွားအလာအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားထားပြီးရှိမရှိသိရန်, အန္ဒြေ Dyhan မှထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Semalt တစ်က်ဘ်ဆိုက်၏ဦးတည်ရာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကဒီလွှဲပြောင်း spam များကို၏ URL လိပ်စာကို copy နှင့်လိပ်စာသေတ္တာထဲမှာ paste လုပ်ပါအကြံပေး ။
Sharebutton spam အလုပ်လုပ်ပုံ
Sharebutton သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အဆင့်ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဤဂူဂဲလ် Analytics မှ spam များသည်ဆက်နွယ်သူများနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ယာဉ်အသွားအလာကိုမောင်းနှင်သည်။ သို့သော်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုရှာရန်သို့မဟုတ် Sharebutton.to scripts ကိုဖွင့်ရန်မသင့်လျော်ပါ။ ရည်ညွှန်းထားသော spam အတုသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အား malware နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောခြိမ်းခြောက်မှုများကိုခိုးယူနိုင်သည့်ကုဒ်များပါဝင်သည်။
Sharebutton.to scripts များဖွင့်ခြင်းသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ၏အကောင့်များ၊ စကားဝှက်များနှင့်အခြားဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဟက်ကာများကိုအဆုံးသတ်ပေးလိမ့်မည်။
Sharebutton.to မှမကြာသေးမီကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသင် download လုပ်ပါကထိတ်လန့်စရာနေရာမရှိပါ။ ပြည့်စုံသော anti-malware ကိုသာ install လုပ်ပြီးသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် malware နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အပြည့်အဝစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ GA အစီရင်ခံစာများမှ sharebutton.to လွှဲပြောင်း spam များကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်နည်း
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 1. သင့်ရဲ့ filter ကိုပုံစံ setting ကိုပြောင်းလဲပါ
သင်၏ GA အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီး 'Admin' အပိုင်းကိုနှိပ်ပါ။
'All Filters' icon ကိုရွေးပြီး filter အသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါ။
'Filter Name' box ကိုဖွင့်ပြီး 'Sharebutton.to' ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
'Custom Filter' ကိုသင်၏ filter type အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး 'Filter Field' menu မှ 'Campaign Source' ကိုရွေးချယ်ပါ။
'Filter Pattern' အကွက်ကိုနှိပ်ပြီး Sharebutton Google Analytics spam ကိုထည့်ပြီး 'Save' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 2. သင်၏ HTTP settings ကိုပြောင်းလဲပါ
သင်၏ cPanel အကောင့်ကိုဖွင့ ်၍ လော့အင်လုပ်ပါ။
'File Manager' ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏ site အတွက် 'Document Root' ကိုနှိပ်ပါ။
'Show Hidden Files' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး 'Go' ကိုရွေးချယ်ပါ။
မည်သည့် .htaccess ဖိုင်ကိုမဆိုတွေ့ရှိပြီးနောက် 'right edit' ပေါ်တွင်ညာဖက်နှိပ်ပြီး 'Save' ကိုနှိပ်ပါ။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 3. သင်၏ GA ဘာသာစကား filter ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါ
သင်၏ Google Analytics အကောင့်သို့ဝင်ပြီး 'Admin Tab' ပေါ်တွင်ရွေးပါ။
View 'icon ကိုဖွင့်ပြီး filter အသစ်တစ်ခုထည့်ပါ။
နာမည်အကွက်ထဲတွင် 'Language Spam' ရိုက်ပါ။
'Verify Filter' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး 'သိမ်းဆည်း' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အထက်ပါမီးမောင်းထိုးပြထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် Sharebutton Google Analytics spam ကဲ့သို့သောရည်ညွှန်းသည့် domains အားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်၏ filter ပုံစံ၊ HTTP ဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သင်၏ဘာသာစကား filter ကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် Sharebutton လွှဲပြောင်းမှုနယ်ပယ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်သောစာရင်းဇယားများကိုရယူပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာနှေးလာသည်အထိမစောင့်ပါနှင့်။